Igumbi langasese elinebhavu nebhulakufesi e-Riad Todra - I-Airbnb
Igumbi langasese elinebhavu nebhulakufesi e-Riad Todra
U-Hamou unokuphawula okungu-51 kwezinye izindawo.
Siyakwamukela ku-Riad Todra!
Jabulela ukuhlala okumangalisayo eduze kwe-gorges Todra okuwuhambo lwemizuzu eyi-10 kuphela.
Indlu yami yezivakashi iseduze ngqo nomfula we-oasis enhle uma ubuka izintaba. Ungakwazi ukujabulela usuku lwakho ngokuhamba emhosheni noma e-oasis, ukugibela noma ukuphumula ethafeni lami. Ibhulakifesi elimnandi lifakwa nsuku zonke.
Ukwamukeleka kwakho ekamelweni lakho langasese eliphindwe kabili elinokugeza okuyimfihlo.
Njalo ekuseni nginikeza isivakashi sami isidlo sasekuseni. Uma uthanda ungadla endaweni yami yokudlela yemvelo noma u-ode imenyu yedina ngama-dirham angama-70/Umuntu ngamunye. Ungakhetha nsuku zonke izitsha noma uma ufuna ukupheka wedwa.
Nethezeka futhi ujabulele kulesi sigodi esihle noma hamba ugibele!
Isuphamakethe encane itholakala kumamitha angama-25 kuphela.
Uma ufuna ukufunda okwengeziwe ngesiko lamaMoraccan, ukupheka noma umlando, ungangibuza noma yini. Ngiyathanda ukusebenzelana nesivakashi sami futhi uma ufuna ungathola izifundo zokupheka kimi, njengokupheka i-berber omelet noma i-tajine.
Ngiphinde nginikeze ukuvakasha kwamahhala ku-palmerie noma umhosha, ungaphinde ungijoyine ekuvakasheni kwezimakethe zendawo.
Uma ufuna ukufunda okwengeziwe ngesiko lamaMoraccan, ukupheka noma umlando, ungangibuza noma yini. Ngiyathanda ukusebenzelana nesivakashi sami futhi uma ufuna ungathola izifundo zo…